करण जोहर भन्छन्–म समलिङगी हुँ, यहि मेरो समस्या हो - Forseenetwork : Nepalko entertainment web site : nepali cinema & Gossip : nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : nepali art ,music , manoranjan & more
करण जोहर भन्छन्–म समलिङगी हुँ, यहि मेरो समस्या हो
loading... बलिउड निर्माता तथा निर्देशक करण जोहर लैगिंक अभिमुखिकरणका बारेमा खासै खुलेर कुरा गर्दैनन् । तर अब उनको बायोपिकले भने जीवनका केही रहस्यहरुको खुलासा गर्ने भएको छ । करण जोहरकी सहायक लेखक पुनम सक्सेनाले करणको बायोपिकमा उनका जीवनमा केही रहस्यहरुको खुलासा गरेकी छिन् । करण जोहरको बायोपिक ‘एन अनसुटबेल ब्वाय’मा जीवनका केही रहस्यहरु समावेश छन् ।
करण जोहर र शाहरुख खानको मित्रता देखेर धेरैले उनीहरुको सम्बन्धमा शंका गर्छन् । शाहरुख खानसँगको सम्बन्धका बारेमा बायोपिकमा करणले भनेका छन्, “बर्षौ देखि शाहरुख र मेरो बारेमा बिभिन्न हल्लाहरु चलिरहेका छन् । पहिले त मलाई यस्ता कुराहरुले तनाव पनि हुन्थ्यो । एक पटक मलाई एक कार्यक्रममा तपाईँको र शाहरुखको सम्बन्ध पनि अचम्मको छ है भनियो । प्रस्तोताको कुरा गर्ने शैली नै अचम्मको थियो जुन देखेर मलाई रिस उठ्यो । रिसको झोकमा मैलै पनि उनलाई भनेँ तपाईँ आफ्नो भाईसँग सुत्नुहुन्छ ? अनि उनले मसँग मैले सोधेको प्रश्नको मतलब खोज्न थाले । अनि मैले उनलाई भने, तपाईँले मेरो प्रश्नमा मतलब खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले मेरो बारेमा गर्नु भएको कुराको मतलब के हो ? “
करण जोहरका लागि शाहरुख खान पिता र दाजू समान छन् । पहिले पहिले शाहरुख र आफ्नो सम्बन्धका बारेमा हुने कुराहरुबाट तनाव लिने करण अहिले भने यी कुराहरुलाई सामान्य रुपमा लिन्छन् । करणका अनुसार अहिले त, यदि विवाह पछि कोहीसँग अफेयर छैन भने मानिसहरु त्यसलाई ‘गे’ सम्झन्छन् ।
लण्डन एयरपोर्टको किस्सा
लण्डन एयरपोर्टमा भएको एक घटनाका बारेमा करण भन्छन्, “लण्डन एयरपोर्टमा एक अन्जानले मलाई सोधे, के तिमी गे हौ भन्ने यो कुरा सहि हो ? र्मैलै भनेँ, किन ? उनले भने तपाईँ ईन्ट्रेस्डेड हुनुहुन्छ ? त्यसपछि त्यत्तिकै यहि कुरामा ऊ मसँग झगडा गर्न थाल्यो ।”
म समलिङगी हुँ, यो मेरो समस्या
आफू समलिङगी भएको बारेमा करण जोहर भन्छ्न, “यदि कोही मानिस एक्लै छ भने उसले म ऊ सँग सुत्न चाहन्छु भन्ने सोच्छ । म कहिल्यै पनि लैङिगक अभिमुखिकरणका बारेमा कुरा गर्दिन । किनकी मेरो समस्या भनेको म समलिङगी हुनु हो । मानिसहरु मेरो बारेमा के सोच्छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । म यो देशको लागि समलिङगी ब्वायको पोस्टर बनिसकेको छु । मानिसहरु मलाई तिमीले यो देशको नाम र समाजलाई बर्बाद गर्यौ भन्छन् । मलाई यस्ता कुराहरुले खासै असर गर्दैन । उल्टो मलाई त यस्ता कुराहरु सुन्दा र सामाजिक सञ्जालमा पढ्दा हाँसो उठ्छ । “
दश वर्षपछि शुद्धि फ्लोरमा जाने पक्का, ट्युबलाईटको ट्रेलर २५ मेमा
करण जोहरको सिनेमा शुद्धि घोषणा भएको लामो समय पछि फ्लोरमा जाने भएको छ । पहिले ऋतिक रोशन र पछि सलमान खान हुने भनिएको यस सिनेमामा अन्त्यमा..
करणको बायोग्राफी गलत, उजुरी पर्ने संकेत
‘कफि विद करण’मा जस्टिन बिबर
काजोलको निशानामा करण, भनिन् किताब र फिल्म बिकाउन गर्छन् ईमान्दार भएको नाटक